OromoStruggle-Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Har’a Finfinnee Hoteela – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoStruggle-Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Har’a Finfinnee Hoteela
OromoStruggle-Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa
Har’a Finfinnee Hoteela Ilillitti walgahiin “Oromian Economists and Business Development” jedhuu hundeffamuuf jira.
Walgahicha Lamma Magarsaatu gaggeessaa ture. kaayyoon itti fufa olola Lammaa Magarsaa kan lallaba “dinagdee Oromiyaa” san.
Otuu dubbannuu, Qabeenyi Gamshuu Bayyanaa akka hin sochonee godhamuun kan yaadatamu. Ob Gamshuun abbaa qabeenyaa Hoteela Ilillii ti. Dhimmi qabeenyi isaa akka hin sochiine godhameef immoo kan ‘malaanmaltummaa’ waliin walqabate haa jedhamu iyyuu malee, dhugaan jiru sababoota lama.
1ffaa wayyaneen gargaarsa command postiif godhi jedhan Gamshuun didee ture. Sababa kanaaf itti xiyyeeffatame
2ffaa immoo Odaa Bus yogguu hundeffamuu qarshii guddaa kan share godhe Gamshuudha ture.
Garuu Allamuddin qarshii miliiion 40, 000 Share natti gurgura jedhe erginan Gamshuu dhaabbanni kun kan Oromoo hanga ta’eetti Allamuddiin keessa gallan qarshiikoo naaf deebisa jedhetu Allamuddin keessa akka hingalle nama godhee dha. Kunis diinummaa itti jabeesse.
Biyya diinaan qabamee jiru keessatti, siyaasaa alagaan bulfamaa jiru keessatti lallabni “warraaqsaDindagdee” eessayyuu akka hin geenye beekamaa dha. Biyyi siyaasaan hin bilisoomne, dinagdeen guddatee eessayyuu gahuu hin danda’u.
Kan dursu, mirga abbbaa biyyummaa dhugoomfachuudha.